मार्टेकले नयाँ प्रायोजक जुमेरांगलाई स्वागत गर्दछ! | Martech Zone
सोमबार, सेप्टेम्बर 12, 2011 सोमबार, सेप्टेम्बर 24, 2012 Douglas Karr
हामी मार्टेकको साथ नयाँ प्रायोजनको घोषणा गर्न अत्यन्त उत्साहित छौं जुमेरंग! Zoomerang हाम्रो मार्केटिंग टेक्नोलोजी प्रायोजक हो, हाम्रो एनालिटिक्स प्रायोजक सामिल - वेबट्रेंडहरू। (हामीसँग सामाजिक, मोबाइल, ब्लगि and र ईमेलको लागि अतिरिक्त प्रायोजकहरू छन्)।
हामी मार्टेकको फुटप्रिन्टको साथ जारी राख्नका लागि मार्केटिंग टेक्नोलोजी रेडियो कार्यक्रम, मार्केटिंग टेक्नोलोजी भिडियोहरू, एक शानदार twitter र फेसबुक उपस्थिति, र छिटो बढ्दो मार्केटिंग न्यूजलेटर (माथिको सदस्यता क्लिक गर्नुहोस्), हामी हाम्रो दर्शकहरूसँग अधिक अन्तर्क्रियात्मक अवसरहरू खोज्दै थियौं।
संग एक साझेदारी जुमेरंग उत्तम छ। अब तपाइँ हाम्रो साइडबारमा प्रत्येक हप्ता एक सर्वेक्षण फेला पार्नुहुनेछ जुन हामी हाम्रा पाठकहरूसँग प्रचार र छलफल गर्नेछौं। कृपया यिनीहरूमा भाग लिनुहोस् ताकि हामी केहि उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं। (यदि तपाईं यो आरएसएस मार्फत पढ्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित हुनुहोस् मार्फत क्लिक गर्नुहोस् र सर्वेक्षणलाई उत्तर दिनुहोस्).
हामी पनि जूमेरrangमा टोलीबाट केहि अविश्वसनीय डाटा प्राप्त गरिरहेको छौं अनौपचारिक (हाम्रो पहिलो लगभग तयार छ!), प्रस्तुतीकरण, ह्वाइटपेपर, वेबिनार, भाषण र ब्लग पोष्टहरू! साथै, कृपया जेसन मिलर, बजार उपकरणहरू (उर्फ जुमेरंग) सामाजिक मिडिया प्रबन्धकलाई स्वागत गर्नुहोस्। जेसन को लागी ब्लग पोस्ट लेख्न को लागी हुनेछ Martech Zone!
यहाँ तपाईं को लागी एक उद्घाटन Zoomerang प्रस्ताव छ!
पहिले - तपाइँ बिल्कुलaको लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ निःशुल्क आधारभूत खाता Zoomerang संग! त्यो मात्र होईन, जुमेरांगमा दयालु व्यक्तिहरूले प्रो का वार्षिक खाता प्रस्ताव गर्दै छन् of १ for 149 को लागि एक वर्षको लागि मात्र साथीहरूको लागि Martech Zone; त्यो नियमित मूल्य बन्द $ 50 हो। अब साइन अप गर्नुहोस्!